विद्यालयमा आफ्नो बच्चा मदत | USAHello | USAHello
स्कूल शुरू रोमाञ्चक र कठिन दुवै छ. तपाईं स्कूलमा आफ्नो बच्चा मद्दत गर्न आवश्यक हुनेछ. आफ्नो स्कूल जीवनमा छोराछोरीलाई कसरी समर्थन गर्न सिक्न र तिनीहरूलाई सफल मदत. आफ्नो बच्चाको लागि ट्यूशन समर्थन बारे पत्ता.
स्कूल छोराछोरीलाई जहाँ सबैभन्दा समय खर्च छ. तिनीहरूले स्कूलमा भाषा र संस्कृति सिक्न. आमाबाबुले मदत गर्न लागि यो महत्त्वपूर्ण छ. तपाईं राम्रो अंग्रेजी थाहा छैन सक्छ, तर आफ्नो बच्चा मदत गर्न सक्छ धेरै तरिका छन्. र तपाईं तिनीहरूलाई देखाउन सक्छौं कसरी आफूलाई मद्दत गर्न! यहाँ तपाईं स्कूलमा आफ्नो बच्चा सहायता सहायता गर्न केही विचारहरू छन्.
सबै उमेरका लागि सुझावहरू
आमाबाबुले कुनै पनि उमेर को बच्चा मदत गर्न सक्नुहुन्छ कि केही कुराहरू छन्.
आफ्नो भावना बारे आफ्नो बच्चा सोध्न
उसले भावना छ कसरी विद्यालयमा एक बच्चा सधैं कुरा हुनेछ. तिनीहरूले एक कठिन समय भएको हुन सक्छ, तर तिनीहरूले तपाईंलाई चिन्ता गर्न चाहनुहुन्छ सक्छ. तिनीहरूले महसुस कसरी तिनीहरूलाई अक्सर सोध्न. तिनीहरूले तपाईंलाई सोध्न भने आफ्नो समस्या बारेमा बताउन बढी सम्भावना हुन्छ.
आफ्नो बच्चा संग स्कूल भ्रमण
यो एक नयाँ स्कूलमा सुरु गर्न कठिन छ. स्कूल को पहिलो दिन अघि आफ्नो बच्चा संग स्कूल भ्रमण. त्यसपछि तिनीहरूले त्यसैले भ्रमित वा आफ्नो पहिलो दिन हराउने.
खेल र अन्य गतिविधिहरु बारे पत्ता
संयुक्त राज्य अमेरिका मा धेरै बच्चाहरु टोली मा खेल खेल्न. अरूलाई क्लब सामेल वा स्कूल पछि संगीत बजाउन. आफ्नो बच्चा कुनै पनि गतिविधिहरु रुचि छ भने पत्ता. खेल तिनीहरूलाई स्वस्थ राख्न र मित्र बनाउन मदत गर्नेछ.
किन्न वा सामाग्री फेला
पुस्तकहरू र आपूर्ति आफ्नो बच्चा स्कूल सुरु गर्नुभन्दा पहिले आवश्यक किन्न प्रयास. तपाईं आपूर्ति किन्न सक्छन् भने, आफ्नो बच्चाको शिक्षक कुरा. तिनीहरूले तपाईंलाई भन्नेछु जहाँ प्राप्त आपूर्ति मद्दत गर्न.
शिक्षकहरू इमानदार हुन
अमेरिकी विद्यालय छोराछोरीको कल्याण संग साथै आफ्नो शिक्षा संग चिन्तित हुनुहुन्छ. पनि, अमेरिकी शिक्षकहरू धेरै प्रत्यक्ष छन्. तिनीहरूले कुनै पनि व्यवहार समस्या बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु हुनेछ. विद्यालयमा कलिलो बच्चाको लागि, तिनीहरूले मुद्दाहरू आफ्नो शरीर संग कुरा हुन सक्छ. जस्तै, एक पूर्वप्राथमिक शिक्षक तपाईंलाई बताउन सक्छ आफ्नो बच्चा पेट समस्या छ वा एक दाना छ. यदि यो असहज बनाउँछ, शिक्षक आफ्नो बच्चा मद्दत गर्न खोजिरहेको छ कि सम्झना. तपाईं समस्या र फेला समाधान बारे इमानदार कुरा गरेर आफ्नो बच्चा र शिक्षक समर्थन गर्न सक्छौं.
समर्थन पढाउने प्राप्त
पढाउने विद्यार्थी मद्दत गर्छ. एक वयस्क, शिक्षक, वा अर्को विद्यार्थी एक विद्यार्थी अभिभावक गर्न सक्षम हुन सक्छ. आफ्नो विद्यार्थी अन्य विद्यार्थी अभिभावक गर्न सक्षम हुन सक्छ, धेरै. केही विद्यालय कार्यक्रम स्कूल पछि वा विद्यार्थी पढाउने प्राप्त गर्न को लागि केही कक्षाहरू समयमा छ.
व्यक्तिविशेष र निजी कम्पनीहरु पनि अभिभावक. Tutors सामान्यतया कुनै पनि विषय लागि उपलब्ध छन्. निजी पढाउने सामान्यतया स्कूल पछि हुन्छ र पैसा खर्च हुनेछ. तपाईं पनि नजिकैको संगठन मा एक स्थानीय कार्यक्रमबाट आफ्नो विद्यार्थी लागि निःशुल्क पढाउने मद्दत पाउन सक्षम हुन सक्छ, धार्मिक समुदाय, वा कार्यक्रम स्कूल पछि-. बस शरणार्थी र अन्य नव आगन्तुक विद्यार्थी सहयोगको लागि संगठन हुन सक्छ. तपाईंको विद्यालय कार्यालय नजिकैको निजी Tutors र निःशुल्क पढाउने सूची हुन सक्छ. तपाईं पनि हेर्न सक्छन् FindHello आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम को लागि.
Daycare र पूर्वप्राथमिक
तिनीहरूले बच्चाहरु हुँदा बच्चाहरु Daycare सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. केही daycares मात्र हो जो बच्चाहरु हुनेछ2पुरानो महिना. बच्चाहरु सामान्यतया4वा5तिनीहरूले बाल सदन सुरु गर्दा वर्षको. यो तिनीहरूले सबैभन्दा मदत चाहिन्छ गर्दा हो.
लुगा र राख्नु र बन्द गर्न सजिलो हो कि जूता फेला
पूर्वप्राथमिक र daycare मा शिक्षक धेरै बच्चाहरु पोशाक र तिनीहरूलाई मदत गर्न सिकाउँदा तिनीहरूले गर्न सक्छन्. जब लुगा बन्द लिन सजिलो, तपाईं बच्चा र शिक्षक दुवै मदत छन्.
स्कूल जस्तै तालिका सेट
आफ्नो बच्चा एक झपकी लिन्छ वा स्कूलमा शान्त समय छ भने, घरमा त्यसै. तिनीहरूलाई स्कूल तालिका पछ्याउन लागि यो सजिलो बनाउनेछ.
पढाइ छोराछोरीलाई जवान हुँदा सुरु गर्न एक राम्रो बानी हो. पढाइ मद्दत गर्छ आफ्नो बच्चा स्कूलमा राम्रो. आफ्नो बच्चा केही एक हप्ताको समय र सुत्नेसमय मा पढ्न प्रयास. यदि तपाईं राम्रो अंग्रेजी थाहा छैन, चित्र पुस्तकहरु फेला पार्न र चित्रहरु मा के भइरहेको छ तपाईंलाई बताउन आफ्नो बच्चा सोध्न. तपाईं पनि सँगै अंग्रेजी अक्षरहरू सिक्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ.
प्राथमिक विद्यालय र मध्य विद्यालय
आफ्नो बच्चा ग्रेड सुरु हुनेछ 1 उमेर मा 6. प्राथमिक र मध्य विद्यालय ग्रेड समावेश 1 गर्न 8.
एक गृहकार्य तालिका सेट
संयुक्त राज्य अमेरिका मा बच्चाहरु हरेक दिन गृहकार्य केही प्रकारको प्राप्त. तपाईं हरेक रात कम्तिमा एक सानो बिट गर्न तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ. उनीहरूले काम गरिरहेका छौं के बुझ्न भने, तिनीहरूलाई यो बारेमा बताउन अनुरोध. जब तपाईं तिनीहरूलाई मदत गर्न प्रयास.
शिक्षक संग जाँच
बनाउन आफ्नो बच्चा गरिरहेको छ कसरी सिक्न अभिभावक-शिक्षक सम्मेलन धाउन निश्चित. तपाईं एक अनुवादक आवश्यक छ भने, समय को अगाडी शिक्षक सोध्न आफ्नो बच्चा बताउन. तपाईं बारेमा चिन्तित हुन सक्छ कि केहि बारेमा शिक्षक कुरा गर्न नडराऊ.
हरेक दिन आफ्नो बच्चाहरु संग पुस्तकहरू पढ्न सम्म तिनीहरूले धाराप्रवाह पाठकहरूलाई छन्. यदि तपाईं अंग्रेजी थाहा छैन, तपाईं अंग्रेजी मा तपाईं पढ्न र अनुवाद गर्न बच्चा अनुरोध गर्न सक्छ. धेरै बच्चाहरु भिडियो खेल खेल्न चाहन्छु हुनेछ, टि। भी हेर्नु, वा यो उमेर मा सामाजिक मिडियामा हुन. बनाउन आफ्नो समय सीमा र पढाइ महत्त्वपूर्ण छ भनेर तिनीहरूलाई देखाउन निश्चित.
बच्चाहरु सामान्यतया तिनीहरूले हुँदा उच्च विद्यालय सुरु 14 वा 15. उच्च विद्यालय फरक चुनौतीहरू ल्याउँछ.
हरेक दिन स्कूल बारेमा आफ्नो बच्चा कुरा गर्न जारी
यो उमेरमा, आफ्नो बच्चा उनीहरूले प्रयोग रूपमा धेरै छैन बताउन सक्छ. तिनीहरूले सिकिरहेको बारेमा कुरा गर्न तिनीहरूलाई प्रोत्साहन र तिनीहरूले कसरी महसुस गर्दै.
आफ्नो बच्चा खेल वा गतिविधिहरु गर्छ भने, यदि तपाईं तिनीहरूलाई जाने. अमेरिकामा आमाबाबुले अप देखाएर छोराछोरीलाई समर्थन. यो पनि तपाईं आफ्नो समुदायमा थप मानिसहरूलाई भेट्न मदत गर्न सक्छ.
अर्को कदम बारे कुरा
संयुक्त राज्य अमेरिका मा विद्यार्थी कलेज लागि योजना सुरु गर्दा उच्च विद्यालय छ. आफ्नो योजना तपाईंको बच्चाहरु प्रोत्साहन. क्यारियर र कलेज योजना संग स्कूल देखि मद्दत प्राप्त.
चुनौतिहरु बारेमा पूर्व नव आगन्तुक वार्ता त्यो एक बच्चाको रूपमा सुरु गर्दा स्कूल सामना. उनले आफ्नो बच्चा मदत गर्ने बारे केही सल्लाह प्रदान गर्दछ.
एक आमा को लागि एक विशेष टिप्पणी
किशोरीहरूको बाबु आमा कठिन छ! तपाईं सधैं हाम्रो बच्चाहरु बढ्न गर्दा र परिवर्तन गर्न के थाहा नहुन सक्छ. यो छोराहरू उमेर संग एकल आमा को लागि मुश्किल हुन सक्छ 17 र पुरानो. आफ्नो विद्यार्थी उच्च स्कूलमा असफल छ भने, उहाँले कक्षाहरू छोड्न वा स्कूल पूरै छोड्न सक्नुहुन्छ.
चेतावनी संकेत लागि बाहिर हेर्न. आफ्नो बच्चा निराश देखिन्छ वा यदि स्कूल बारेमा कुरा रोक्छ, उहाँले असफल हुन सक्छ. प्रश्न ध्यानपूर्वक सोध्न जारी राख्न र धैर्य तपाईं कुरा गर्न उसलाई प्रोत्साहन. उनको शिक्षकहरू र विद्यालय संग सम्पर्कमा रहन, त्यसैले तपाईं के रहेको छ थाहा. यो समस्या मद्दत गर्न आफ्नो काम को भाग हो.
के तपाईं साँच्चै चिन्तित छन् भने, मदत माग्न. को संग सुरु राष्ट्रिय अभिभावक हेल्पलाइन. यसलाई मा फोन तपाईंले समर्थन दिन र सल्लाह गर्न सक्छन् प्रशिक्षित मान्छे छ (855) 427-2736, शुक्रवार गर्न सोमवार, 10 गर्न am PST7PM PST. यो पनि धेरै अनलाइन संसाधन छ.
कसरी म कलेज जाने गर्छन्?